Golaha Shacabka oo maanta kulan yeelanaya - Tilmaan Media
Waxaa maanta dhici doona kulan ay yeelan doonaan xubnaha Golahaha Shacabka Baalamanka Federaalka Soomaaliya. Kulanka oo kadhici doona xarunta Golaha Shacabka ayaa waxaa cabsi laga qabaa in sidii dhacday markii la ridayay xukuumaddii Xassan Cali Khayre in si kadis ah loo baddalo ajandaha oo lakeeno ajande wakhti kororsi ku samaysanayaan Golaha Shacabka.
Ajanadaha Golaha Shacabka ayaa ah yaa ah Akhrinta koowaad ee Sharciga Dambiyada Galmada la xiriira, waa sida lagu sheegay fariimo loo diray xubnaha.
Maalmahan waxaa ladareemayay guux ku aadan in Golaha Shacabku samaystaan wakhti kororsi iyagoo ku doodaya inay xilka ku wareejinayaan xubno lagu soo doortay qof iyo cod oo kaliya. Sidaas darteed waa suurtagal in maanta lameel mariyo wakhti kororsi ay samaystaan xubnaha Golaha Shacabku.
Waxaa lafilayaa inuu qabsoomo wajigii saddexaad ee shirka Dhuusamareeb, halkaasoo ay isku arki doonaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu.
Waxaa dhici karta in wakhti isu kordhinta Golaha Shacabka ee laga yaabo in ay dhacdo ay xoojiso doodda madaxwaynaha doowladda federaalka iyo wafdigiisa oo doonaya in dalka kadhacdo doorasho qof iyo cod ah.